Tag: qaybinta waxyaabaha | Martech Zone
Tag: qaybinta waxyaabaha
Elokenz: Si caqli-gal ah ugu soo dir Mawduucaaga Waxqabadka ugu Wanaagsan ee Warbaahinta Bulshada
Suuqleyda ayaa asal ahaan hal abuur leh waxaanan aaminsanahay mararka qaarkood inay aad u liidato waxqabadka ganacsigooda. Waa wax aan sii wado inaan isku xasuusiyo qoraaladayda. Waxaan inta badan si qoto dheer ugu dhaadhacaa aaladaha iyo xeeladaha… waxaanan ilaaway inay jiraan dad booqdayaal ah oo aan ila safrin. Shirkadaha, tani waa kormeer weyn. Maaddaama ay sii wadaan fikirka iyo geynta waxyaabaha, waxay ilaawsan yihiin inay jiraan dad aan xitaa laga yaabaa
Maaddaama macaamiisha ay si isa soo taraysa ugu soo dhaqaaqeen isticmaalka wararka khadka tooska ah isla markaana ay haystaan ​​xulashooyin kale oo badan, daabacayaasha daabacaada ayaa arkay dakhligooda oo aad hoos ugu dhacay. Qaar badanna, way adkeyd in lala qabsado istiraatiijiyad dijitaal ah oo run ahaantii shaqeysa. Paywalls badanaa waxay ahaayeen musiibo, kaxeystayaasha macaamiisha iyagoo kaxeynaya waxyaabo badan oo bilaash ah. Soo bandhig xayeysiisyada iyo waxyaabaha la kafaala qaaday ayaa caawiyay, laakiin barnaamijyada tooska loo iibiyo waa kuwo xoog badan oo qaali ah, taas oo ka dhigaysa gabi ahaanba meel aan la gaari karin
1WorldSync: Macluumaadka Waxsoosaarka Aaminaada iyo Maareynta Macluumaadka
Talaado, Oktoobar 11, 2016 Isniin, February 13, 2017 Douglas Karr
Maaddaama iibinta ecommerce ay sii kordheyso xawaare cabsi leh, tirada kanaalada ay calaamaddu ku iibin karto ayaa sidoo kale koray. Joogtada tafaariiqleyda ee barnaamijyada moobiilka, barnaamijyada warbaahinta bulshada, websaydhada elektaroonigga ah iyo dukaamada lagu iibiyo waxay bixiyaan dhowr kanaal oo badan oo dakhli abuura oo ay kula macaamilaan macaamiisha. In kasta oo tani ay soo bandhigeyso fursad weyn, oo awood u siinaysa macaamiisha inay wax iibsadaan wax soo saar markasta iyo meel kasta, waxay kaloo u abuureysaa dhowr caqabado cusub tafaariiqleyda si loo hubiyo in macluumaadka badeecaddu
Waa maxay Qaybinta Mawduucu?
Mawduucan aan la arkin waa ka kooban wax yar oo aan dib ugu laabanayn maalgashiga, iyo, suuq ahaan ahaan, waxaad dareemi lahayd sida ay u adag tahay inay noqoto in la arko waxyaabahaaga xitaa qayb yar oo ka mid ah dhagaystayaasha aad aad ugu dadaashay inaad dhisato dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Nasiib darrose, mustaqbalka ayay u badan tahay inuu isku mid ahaado: Facebook wuxuu dhawaan shaaciyay in hadafkeedu yahay inay qaaddo noocyada 'Organic Organisation' ee la gaaro